အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: Zebra Crossing
ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ် ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် အခုဆိုရင် နိုင်ငံအတော်များများဟာ မလူးသာ မလွန့်သာနဲ့ မနည်း ကို ကြိုးစားရပ်တည်နေရပါတယ် ၊၊ မိမိတို့ရဲ့ ရှိပြီးသားအခြေအနေလေး မပျက်ယွင်းသွားရလေအောင် ရပ်တည် ချက်လေး ယိုင်နဲ့ မသွားရလေအောင် ထိန်းသိမ်းရပ်တည်နေကြရပါတယ် ၊၊ အဲဒီလို ရုန်းကန်နေကြရသလို အခြား တစ်ဖက်ကလည်း ဖွံ့ဖြိုး ဆဲနိုင်ငံ အများစုကတော့ အခြားဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေကို တစ်ဝမ်းတခါးအတွက် သွားရောက် လုပ်ကိုင် နေကြရပါ တယ် ၊၊ ယခုလောလောဆည် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံ တွေ ထဲမှာ ရေ ပန်းစား နေတာကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း စင်ကာပူနိုင်ငံပါပဲ ၊၊ ဟောင်ကောင် လည်း တိုးတက် ပါတယ် ၊၊ ဂျပန်လည်း အဆင်ပြေပါတယ် ၊၊ သို့သော် ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့် သွားလာဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး ၊၊ စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောဆိုနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ အလုပ်လုပ် ရတာ အဆင်ပြေပါတယ် ၊၊ နောက် နိုင်ငံခြားသားအများစုကိုလည်း လိုလိုချင်ချင် လက်ခံနေသေး တာကြောင့် စင်ကာပူ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသား ဦးရေဟာ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ တိုးတက်လျက်ရှိပါတယ် ၊၊
အခုဆိုရင် စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားဦးရေ ဟာ ၁.၆၈ သန်းရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ၊၊ ယခုလောလော ဆယ် ရ၀ % ကတော့ Pass Holder လို့ခေါ်တဲ့ work permit ၊ Spass ၊ Employment Pass Holder တွေ ဖြစ်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ၃၀ % ကတော့ Perment Resident တွေ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊၊ တစ်နေ့တစ်ခြားတိုး ပွားလာတဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဦးရေထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများလည်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသပါဝင် ပါတယ် ၊၊ များပြားလာတဲ့ လူဦးရေ နဲ့အတူ အခြား ယဉ်ကျေးမှု အကျင့်စရိုက် ဓလေ့ ထုံးစံများကိုလည်း ကူးလူး သယ်ဆောင်လာကြပါတယ် ၊၊ ထို့အပြင် အလုပ်အားရက်များမှာလည်း အချင်းချင်းတွေ့ဆုံမှုလေးတွေ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ် ၊၊ မြန်မာ အများစုအတွက် စုံရပ်ကတော့ မြို့လယ်ကောင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ CityHall နားက Pennisula Palaza ဆိုတဲ့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံကြီးပါပဲ ၊၊ စားစရာမျိုးစုံကို ၀ယ်ယူရှိုနိုင်သလို ၊ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ အတွက် မသွားမဖြစ် အမြဲရောက်နေကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ ၊၊ ရုံးပိတ်ရက် အလုပ်အားရက်တွေမှာဆိုရင်တော့ တကယ်ကို ကြိတ်ကြိတ်တိုးအောင် စည်းကားလှပါတယ် ၊၊ မြန်မာ အချင်းချင်း သူငယ်ချင်းတွေကို လည်း တွေ့ ဆုံခွင့်ရသလို မြန်မာအစားအစာ မျိုးစုံကိုလည်း ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ် ၊၊
မြန်မာအများစု ကျင်လည်ရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း မြန်မာ တွေကို အများဆုံး တွေ့ရပါတယ် ၊၊ ဒါ့အပြင် လမ်းကို မျဉ်းကြားမသုံးပဲ လမ်းကူးကြတာကိုတော့ အဲဒီနေရာ North Bridge Road လမ်းမကြီးမှာ အများဆုံး တွေ့ ရပါတယ် ၊၊ အင်း မိမိကိုယ်ကို ရွှေရယ်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ် သမုတ်ထားတဲ့ တန်ဖိုး ရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ အဲဒီလို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လမ်းကူးမယ်လို့ မထင်ပါဘူး ၊၊ဒါပေသည့် မြန်မာတွေ အများ စု သွားလာတဲ့နေရာမှာဖြစ်တာကြောင့် လမ်းကူးနေကြတာဟာ မြန်မာတွေ များဖြစ်နေမလားရယ်လို့ ဘာသာ မရဲတရဲလေး တွေးမိပါတယ် ၊၊ လမ်းတိုလေးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ ဒီပလာဇာကို သွားဖို့အတွက် လူကူးမျဉ်း ကျား နှစ်ခုရှိပြီး ထူးပြီးလည်း လမ်းမလျှောက်ရပါပဲလျက် ဘာအတွက်များ လမ်းကြားက ဖြတ်ပြီး သွားလိုပါလိမ့်၊၊ အင်မတန်မှ ပဲ အရေးကြီးနေသလား သို့တည်းမဟုတ် လမ်းလျှောက်ရတာ ညောင်းတယ်လို့များ ထင်လို့လား ၊ အချိန်ကုန်သက်သာအောင် ပဲလား ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတာ သေချာ မသိပေမယ့် အင်မတန်ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ ထင်မိတာတော့ အမှန်ပါပဲ ၊၊ လမ်းကူးကြတာ ၊ မျဉ်းကျားမဟုတ်ပဲ လမ်းကူးကြတာ ရွှေ တွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ လို့တော့ ဆုတောင်းမိတာပါပဲ ၊၊
တကယ်လို့များ အဲဒီလို သွားရင်းလာရင်း လမ်းကူးတာလေးများတွေ့ရင် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း ချင်းလက်တို့ပြီး တားပေးလိုက်ပါလားဗျာ၊၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွှေဆိုတာ တန်ဖိုးကြီးတယ်လေ ၊၊
... 12:12:00 AM
သေနတ်နဲ့ ရဲတွေ တားနေတာတောင် မရတာကိုမင်းအိမ်ရေ.. ကျွန်တော်မှာက သေနတ်ဆိုလို့ သရက်သီးသနပ်ပဲ ရှိတာနော်... ဘယ်သူက နားထောင်မှာလဲ..
အဟဲ..ကျွန်တော်မဟေသီအတွက်တော့ တာဝန်ယူတယ်ဗျ. မကူးစေရဘူး။ စိတ်ချ...။
16 August 2009 at 1:30 AM
အော် ကိုယုယ ပြောလို့ လာခဲ့တာ အိမ်မှာ လင့်ခ်က အသစ်လို့လဲ မတက်ဘူးနော် ဘာဖြစ်လဲ မသိဘူး လေတယ် ဂယ်ပါပဲ ကွယ်
ဟိုစကားလေး ကြိုက်တယ် ဟိဟိ ဘာတဲ့ ရွှေဆိုတာ တန်ဖိုးကြီးတယ်တဲ့ ဟားဟားးးးးးးးး
အယ် ရယ်စရာ လဲ မပါဘဲနဲ့ ရယ်နေတယ် ဟိဟိ
16 August 2009 at 3:44 AM
ဟုတ်တယ်.. ကိုယ့်တန်ဖိုး ကိုယ့်မြင့်မှ သင့်မယ်...
ဒီပိုစ့်လေး ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ်..
6 September 2009 at 8:31 AM
မိမိတန်ဘိုးကို မိမိသာလျှင် သတ်မှတ်ရတာပေ့ါနော်။ တန်ဘိုးထား ဖတ်သွားပါတယ်။
12 October 2009 at 11:12 PM
Just Notice !
To Be Cooking Rice
Behind the Achievement
Got Feeling !
ခုတလော ... များ
Cloudy Evening At ThuWaNa
Job Vacancy for Ministry of Construction
Remembrance of Honest and Best Friends
4 Days Working for One Week